အဆိုပါ HARD DRIVE ကိုအနေဖြင့်ပြင်ပ DRIVE ကိုအောင်လုပ်နည်း - HARD DISK ကို - 2019
အဆိုပါ hard drive ကိုအနေဖြင့်ပြင်ပ hard drive ကိုအောင်လုပ်နည်း
ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများ, အသုံးပြုသူများသည်သမားရိုးကျ hard drive ကိုတစ်ဦးထံမှပြင်ပ hard drive ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပေမည်။ ဒါဟာသင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လုပ်ဖို့လွယ်ကူသည် - ရုံလိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အရာအနည်းငယ်ရူဘယ်ဖြုန်းနှင့်ပရိသတ်အများနှင့်မပို 10 ထက်မိနစ် connection ကိုပေးစေခြင်းငှါ။
အဆောက်အအုံပြင်ပ HDD ပြင်ဆင်နေ
အထွေထွေစည်းမျဉ်းနှင့်အမျှပြင်ပ HDD ၏ဖန်တီးမှုဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုအောက်ပါအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပေါ်:
အဆိုပါရရှိနိုင် hard disk ကို, ဒါပေမယ့်မဆိုအခမဲ့စနစ်ယူနစ်အတွက်အာကာသ, ဒါမှမဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဖြစ်နိုင်သောအဘယ်သူမျှမကချိတ်ဆက်ဖို့ရှိ၏
HDD ခရီး / အလုပ်ဒါမှမဟုတ် Motherboard ကတဆင့်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုများအတွက်မလိုအပ်ပေါ်တွင်သင်နဲ့အတူယူရန်စီစဉ်လျက်ရှိ၏
လက်ပ်တော့သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားခံရဖို့ drive ကို;
တစ်ဦးချင်းစီအသှငျအပွငျ (ခန္ဓာကိုယ်) ကိုရွေးချယ်ဖို့အလိုဆန္ဒ။
ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်ဟောင်းကွန်ပျူတာကနေဥပမာ, ပြီးသားတစ်ဦးသည်သမားရိုးကျ hard drive ကိုသူသည်အသုံးပြုသူများထံသို့လာကြ၏။ ထိုသို့ဖန်ဆင်းခြင်းပြင်ပ HDD သင်တစ်ဦးသာမန်ကို USB-drive ကိုဝယ်ယူအပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒီတော့ဘာ disk ကိုပရိသတ်အဘို့လိုအပ်ပါသည်:
လက်ဝှေ့ HDD (drive ကို၏ပုံစံအချက်ပေါ်တွင် အခြေခံ. ရှေးခယျြထားကြောင်းအိုးအိမ်: 1.8 ", 2.5", 3.5 ");
ဝက်အူလှည့, အသေးစားသို့မဟုတ်အလတ်စားအရွယ်အစား (အ hard disk ကိုပေါ်သေတ္တာနှင့် screw နှစ်ခုပေါ် မူတည်. လိုအပ်သောမကျမည်အကြောင်း);
ဝါယာကြိုး Mini-USB, Micro-USB အသို့မဟုတ်တစ်စံကို USB connector ကို။
အချို့ကိစ္စများတွင်တစ်ဦး box ထဲမှာ device ကို၏မှန်ကန်သောတပ်ဆင်ဘို့, နောက်ဘက်မြို့ရိုးကိုအတူဝက်အူ4ဝက်အူဖြုတ်။
တစ်ဦး hard drive ကိုဆံ့တံ့သော box ကို Disassemble ။ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုများသောအားဖြင့် "controller ကို" နှင့် "အိတ်ကပ်" ဟုခေါ်သည်သောရရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ ပုံး၏အချို့ရှိ disassemble ရန်မလိုအပ်ဖြစ်ပါသည်, ဤအခြေအနေမျိုးအတွက်, ရိုးရှင်းစွာအဖုံးဖွင့်လှစ်။
Next ကို, သင်သည်ဤပု SATA connector မြားနှငျ့အညီပြုရမည်ဖြစ်သည်, အ HDD ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ သငျသညျဇောက်ထိုး disc ကိုထားလျှင်, ၏သင်တန်းဘာမှအလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
တချို့ကသေတ္တာကို USB မှ SATA-connection ကိုပြောင်းပေးကြောင်းဘုတ်အဖွဲ့ပေါင်းစည်းသောအဖုံးအပိုင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ ဒါကြောင့်မြေတပြင်လုံးပြဿနာပထမဦးဆုံး hard disk ကိုအဆက်အသွယ်များနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ချိတ်ဆက်ရန်ချအနာဆိုး, သာထို့နောက်အတွင်းရှိ drive ကို install လုပ်ပါ။
အောင်မြင်စွာ drive ကိုဆားကစ်ဘုတ်ချိတ်ဆက်နေတဲ့ဝိသေသကလစ် နှိပ်. လိုက်ပါသွားသည်။
အဆိုပါ disk ကိုနှင့် box ရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါ, တစ်ဦးဝက်အူလှည့တစ်ခုသို့မဟုတ်အဖုံးကို အသုံးပြု. အမှုပိတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
USB အဝါယာကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက် - တဦးတည်းအဆုံး (Mini-USB သို့မဟုတ် micro-USB) ပြင်ပ HDD ထဲမှာ connector ကိုထည့်သွင်းနှငျ့အခွားသောအဆုံး - တစ်ဦးကို USB port ကိုဒါမှမဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်၏ system ကိုယူနစ်။
ပြင်ပ hard drive ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း
disc ကိုအသုံးပြုထားပြီးဆိုပါကစနစ်ဖြင့်ဖော်ထုတ်ကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူးမဆိုအရေးယူပါလိမ့်မည် - သငျခကျြခငျြးကိုယျတျောနှငျ့အလုပ်မလုပ်စတင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါသစ်ကို drive ကိုလျှင်, အကငျြ့နှင့်လိုအပ်သောစေခြင်းငှါမိမိအသစ်ကိုစာတစ်စောင်၏ချိန်း format လုပ်ပါ။
သွားပါ "Disk ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု" - စာနယ်ဇင်းဝင်း + R ကိုရိုက်ထည့် diskmgmt.msc.
right-click, ထိုအခြေအနေတွင် menu ကိုဖွင့်လှစ်, ပြင်ပ HDD ပူးတွဲ Find ပြီးတော့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အသစ်တစ်ခုကိုအသံအတိုးအကျယ် Create".
စတင် "Wizard ကိုရိုးရှင်းတဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကိုဖနျတီးဖို့", နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် setting များကိုကိုသွားပါ "Next ကို".
သငျသညျ partitions ကိုစ drive ကိုဝေယူချင်ကြပါဘူးလျှင်သင်ဒီဝင်းဒိုးကိုရှိဆက်တင်ကိုပြောင်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လာမယ့် window ကိုကိုသွားပါ "Next ကို".
တစ်ဦး drive ကို၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိအတွက်စာတစ်စောင်နှင့်စာနယ်ဇင်းကို Select လုပ်ပါ "Next ကို".
လာမယ့် window ကို setting တွင်ဖြစ်သင့်:
စပျစ်သီးပြွတ် Size: ပုံမှန်;
Volume ကိုတံဆိပ်: အအသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသော disk ကို၏အမည်ကား,
သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာအပေါငျးတို့သ parameters တွေကိုရွေးယူဘူးသော Check နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပြီးပြီ".
အခုတော့ drive ကို Windows Explorer ကိုပြသသည်, တခြားကို USB-drives တွေကိုသကဲ့သို့ကောင်းစွာသုံးစွဲဖို့စတင်နိုင်ပါသည်။